आइओसीले निगमलाई पठायो इन्धनको नयाँ मूल्य – Damauli Online News
पालिका चुनाव २०७९
आइओसीले निगमलाई पठायो इन्धनको नयाँ मूल्य
१८ बैशाख २०७९, आईतवार २२:५६
काठमाडौं : भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसीले) नेपालका लागि इन्धनको नयाँ मूल्य पठाएको छ। नेपाल आयल निगमले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आइओसीले नयाँ मूल्य पठाएको जानकारी दिएको हो। नयाँ मूल्य के-कति घटबढ गरेर पठाइएको छ भन्नेबारे भने निगमले विज्ञप्तिमा जानकारी दिएको छैन।
त्यस्तै भारतले नयाँ मूल्यसूची पठाए पनि नेपालमा इन्धनको मूल्य हेरफेर हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे पनि अहिलेसम्म निगमले जानकारी दिएको छैन।
विज्ञप्तिका अनुसार आइओसीले नयाँ मूल्य पठाएसँगै निगमलाई आगामी १५ दिनमा करिब पाँच अर्ब १९ करोड रूपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ।
आइओसीले पठाएको मूल्यसूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २३.०२ रूपैयाँ र डिजेलमा ४०.१३ रूपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ। हाल पेट्रोल लिटरको एक सय ६० र डिजेल एक सय ४३ रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।
वैशाख १८ गतेको नयाँ मूल्य अनुसार निगमको पेट्रोल खरिद लागत भने १८३.०२ रूपैयाँ र डिजेलको १८३.१३ रूपैयाँ पर्छ।
त्यस्तै प्रतिसिलिन्डर एक हजार ६ सयमा बिक्री भइरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासमा निगमलाई एक हजार पचास रूपैयाँ १८ पैसा घाटा हुने निगमले जनाएको छ। ग्यासको खरिद लागत २६५०.१८ रूपैयाँ भएको निगमले जनाएको छ।
निगमलाई मट्टीतेल, हवाई इन्धनमा भने नाफा छ। मट्टीतेलमा लिटरको २.८१ रूपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १२.६४ रूपैयाँ र बाह्यतर्फ ६४.६९ रूपैयाँ नाफा रहेको निगमले जनाएको छ।
अब मट्टीतेलको खरिद लागत १४०.१९ रूपैयाँ, हवाइ इन्धन आन्तरिकतर्फको १४३.३६ रूपैयाँ र बाह्यतर्फको १२३. ७८ रूपैयाँ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसअघि वैशाख ३ गते आइओसीले पठाएको मूल्यमा भन्दा आइतबारको मूल्यमा निगमलाई पेट्रोल र डिजेलमा घाटा बढेको देखिएको छ। त्यस्तै एलपी ग्यासमा पनि घाटा बढेको छ।
मट्टीतेल र हवाई इन्धनको नाफा पनि वैशाख ३ को तुलनामा कम भएको छ। वैशाख ३ को मूल्यअनुसार निगमलाई १५ दिनमा करिब तीन अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ घाटा हुने देखिएको थियो। वैशाख १८ गते आइतबार नयाँ मूल्य आएसँगै अब घाटा पाँच अर्ब नाघ्ने देखिएको हो।
युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूलो प्रभाव परेको छ। कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेसँगै पेट्रोल लगायत इन्धनको भाउ बढेको हो। अर्कातर्फ आयल निगम पहिल्यैदेखि घाटामा चलिरहेको थियो। त्यसैले अहिले नेपाली बजारमा इन्धनको भाउ छोटो समयमै धेरै बढिरहेको छ।
आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आफैं कच्चा तेल खरिद गर्दैन। आइओसीबाट आफूलाई चाहिने सबै किसिमका प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ। यसरी पेट्रोलियम किनेबापत् आइओसीले हरेक महिना पन्ध्र-पन्ध्र दिनमा आयल निगमलाई मूल्य पठाउँछ।
आइओसीले पठाउने मूल्य उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको लागतमा आधारित हुन्छ। लागत मूल्यमा आफ्नो प्रशोधन शुल्क लगायत खन्य खर्चहरू जोडेर आइओसीले नेपालको निम्ति बिक्री मूल्य तय गर्छ।
त्यसपछि आयल निगमले पेट्रोलियम आयात गरेबापत् सरकारलाई तिर्नुपर्ने भन्सार लगायत महसुलहरू, आफ्नो प्रशासनिक खर्च, ढुवानी लागत र डिलर कमिसनसमेत जोडेर उपभोक्ता मूल्य तय गर्छ। यसरी हामीले किन्ने पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण हुन्छ।
यो प्रक्रियामा पेट्रोलियमको मूल्य तय हुने सबभन्दा ठूलो आधार भनेकै आइओसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको दाम हो।
रिस्तिको पुनःमतदानमा ९९५ भाेट खस्याे
नेता नेम्बाङ,श्रममन्त्री श्रेष्ठ र पूर्वआइजिपी खनाल जोशीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न अस्पतालमा
भानु –११ को वडाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार जोशी विजयी
ऋषिङ–८ को वडाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार श्रेष्ठ विजयी
व्यास–८ मा भोलि सवारी साधन सञ्चालनमा रोक
बेसीशहरको मेयर र उपमेयरमा एमाले विजयी
दमौली अनलाइन मिडिया
सूचना विभाग दर्ता नं. : २८४२-२०७८/७९
ब्यास ०२,दमौली तनहुँ
+977 9851204631, 9806670775
प्रबन्ध निर्देशक: एलोज श्रेष्ठ
कार्यकारी सम्पादक: धन बहादुर थापा
सम्पादक : सुमन आले
संवाददाता : मिलन तामाङ
बजार प्रतिनिधि : बिपना थापा
बजार प्रतिनिधि : दिपा पौडेल
Copyright © 2010 - 2020 Damaulionline.com. All rights reserved.